यरूशलेममा Marii Magdaliny को चर्च
यरूशलेम नजिकै छ जो सानो Magdala को, नगर, एक महिला बस्थे। कुनै आमाबाबु, कुनै पति, कुनै बच्चाहरु: त्यो एक्लै थियो। उनको नाम Mariya Magdalina थियो। त्यो माछा बजार मा काम गरे। मानिसहरू उनको साथ amorous मोजमस्ती मा indulging, उनको एकाकीपनको र पागलपन गरिन्थ्यो। को स्थानीय मरियम रुचि थिएन, उनको र बिग्रेको तरकारी ढुङ्गा फाले। त्यो आफु त्यसो गर्न असमर्थ थियो कुनै एक थियो सुरक्षित गर्नुहोस्। येशूले आफ्ना प्रेषितहरूलाई संग शहर आउँदा केटी जीवन परिवर्तन भयो।
मारिया - ख्रीष्टको अनुयायी
शिक्षक उनको बाहिर सात दुष्ट बहिष्कार, मग्दलिनी लाग्यो हल्का थियो, र त्यो प्रेम मेरो सबै हृदयले, उहाँको पछि लागे। नयाँ नियममा यो येशूले पनि मरियम प्रेम लेखिएको छ, प्रेम एक, उच्च आध्यात्मिक थियो। Mariya Magdalina त्यो आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको पछि मानिसहरूले उहाँको शिक्षा लगे, ख्रीष्टको पहिलो र केवल चेला थियो।
मरियम आफ्नो शिक्षक को कार्यान्वयन उपस्थित थियो, येशू, मरिरहेका थियो क्रूसमा मृत्यु आक्रान्त, आफ्नो हात आयोजित। त्यो आफ्नो शरीर र खुट्टा आवश्यक तेल गंदा धोए। मारिया गहिरो मात्र ख्रीष्ट पुनरुत्थान भनेर विश्वास सक्छ आफ्नो मृत्यु Relive। उनले पहिलो चिहान खाली, आँसु फुट्नु छ कि देखेर, आफ्नो चिहान र लागि नियुक्त दिन आए। प्रश्न सुनेपछि "तिमी किन रो छन्?" - Marie उनको एक गाडे प्रेम जवाफ दिनुभयो र त्यो कहाँ थाहा छैन। त्यो येशू, खुसी कुरा र प्रेरितहरू, मानिसहरू र शासक गर्न राम्रो समाचार गरियो कि आँसु मार्फत देखेर।
एक सेन्ट मरियम मग्दलिनी को चर्च जहाँ खडा ठाउँका - गेतसमनीको। यो एक रूसी अर्थोडक्स मन्दिरमा छ आश्रममा बेथानी ख्रीष्टको पुनरुत्थानको समुदाय। अलेक्जेन्डर तेस्रो, रूस को सम्राट, यसको निर्माण भाग लिए। यरूशलेममा Marii Magdaliny को चर्च, अलेक्जेन्डर आमाको स्मृति सम्मान मा अठारौँ शताब्दीमा निर्मित - मारिया Alexandrovna। त्यो जर्मन थियो, तर रूसी महारानी भयो र Orthodoxy अपनाए। Patroness रानी Mariya Magdalina थियो, त्यसैले चर्च भनेर नाम consecrated थियो।
Marii Magdaliny को घर चर्च
मारिया येशू ख्रीष्टको अनुयायी थियो र आफ्नो विद्यार्थी थियो। तसर्थ, यरूशलेममा Marii Magdaliny को मुख्य चर्च, हुनत यो रूसी रानी को सम्मान मा बनाइएको थियो। सबै भन्दा ठूलो canvases एक मरियम चित्रण गरिएको मा, प्रचार टाइबेरियसलाई आए। यो दाइजो यो उपहार बिना imeratoru प्राप्त गर्न असम्भव थियो बताए छ। मग्दलिनी गरिब थियो, त्यसैले टाइबेरियसलाई एक चिकन अन्डा ल्याए। त्यो येशू पुनरुत्थान हुनुभएको थियो कि मलाई भन्नुभयो। यो मृत, साथै सम्भव अन्डा सेतो शरमाना फिर्ता आउन असम्भव छ भन्दै, के राज्यपाल हाँसिन्। एउटै क्षणमा राजाको हात मा अन्डा उज्ज्वल रातो थियो।
कुनै आश्चर्य अलेक्जेन्डर एक मन्दिर लागि यो स्थान छनौट गरे। अब सेन्ट मरियम मग्दलिनी, गेतसमनीको, वा को चर्च खडा जहाँ प्लट गेतसमनीको बगैंचामा, एक सेन्ट छ। यो arhimadrid सल्लाह Antonin Kapustin किन्न। दाऊदले Grimm - चर्च डिजाइन गर्ने रूसी architect। यरूशलेम पत्थर प्रयोग को निर्माण को लागि, र धातु र काठ रूस देखि ल्याइयो। प्रतीक र चित्रित सबै मन्दिरको भवन रूसी कारीगरों र कलाकारहरूको गरे। सबै लागत शाही परिवार कल्पित छ। Marii Magdaliny को चर्च हजार आठ सय असी आठौं वर्षमा consecrated थियो। Nunnery यहाँ धेरै पछि देखा पर्नुभयो। यो अर्थोडक्स Englishwoman द्वारा स्थापित भएको थियो मार्था मरियम र 1934 मा, स्थानीय शान्ति र सौहार्द फेला पार्न पहिलो।
को महारानी अन्तिम शरण
यो पृथ्वीमा उहाँलाई यहाँ मुर्दा गाड्नु गर्न bequeathed त एलिजाबेथ Feodorovna, चर्च प्रवेश पहिलो पटक, उनको सौन्दर्य मारे। तिनीहरूले गरे, तर तुरुन्तै। एलिजाबेथ, अन्य शाही personages साथ जहाँ त्यो मेरो मा गिरा भइरहेको द्वारा मर्न किस्मत थियो Alapaevsk, मा Bolsheviks लगियो। यो 1918 मा भयो। मात्र दुई वर्ष पछि, 1921 मा, महारानी पवित्र अवशेषहरूको मण्डली Marii Magdaliny हस्तान्तरण गरेका थिए।
गुम्बामा र यसको भूमि को पर्यटन
टाढाबाट देखि Marii Magdaliny को चर्च यसको सेतो पर्खालहरु र सुनको domes आँखा आकर्षित गर्छ। Abode जैतुन डाँडामा को खुट्टा मा छ, र गेतसमनीको एक बगैचा घेरिएको छ। नजिकैको परमेश्वरको आमा को चिहान छ। मन्दिरमा प्राप्त गर्न, तपाईं एक ठूलो गेट सुनको रंग, पहाड को दक्षिण स्थित माध्यम गर्न सक्नुहुन्छ। भित्र एक पटक, तपाईं एक सीढी देख्नेछन्। यो सीढी ख्रीष्टको सुतेको प्रेरितहरूलाई जेम्स, पत्रुस र यूहन्ना को प्रार्थना जहाँ समयमा गेतसमनीको, को Grotto गर्न जान्छ। यो बिन्दुमा येशूले प्रसिद्ध शब्दहरू छ: "। वाच र प्रार्थना, तपाईं प्रलोभनको प्रवेश नत्र आत्मा तयार छ, तर शरीर कमजोर छ।" मरियम चर्च भवन धेरै सुन्दर र प्रचुर मात्रामा सजाया छ, तर एकै समयमा यसको सादगी संग captivates। मन र सद्भाव पहाडी शान्ति वरिपरि Hovering। त्यहाँ सफा राखिएको छ। बगैंचामा त्यहाँ रूखहरू र फूल धेरै छ, चिटिक्क र सुग्घर छ। भित्र, सबै कुरा धेरै चमक बिना एकदम सरल र भद्र छ। वेदी माथि - को मरियम मग्दलिनी एक अन्डा पकड छवि, गभर्नर टाइबेरियसलाई ल्याए। सम्राट्लाई, भन्दै, हात बाहिर रातो भएको अन्डा गिरा जब यो इतिहास, संग "साँच्चै उहाँले पुगेको छ!" अनि इस्टर लागि अन्डा painting को परम्परा सुरु भयो।
मण्डली Marii Magdaliny कहाँ अरू छ?
संसारभरिका मसीहीहरू सेन्ट Marii Magdaliny को सम्मान मा एक चर्च erected। हामी विशाल चर्च र साना chapels निर्माण। जो मान्छे आवश्यक उनको countenance प्रार्थना घण्टा पवित्र तयार गर्न मद्दत गर्छ। यो तीर्थयात्रीहरू हजारौं प्रत्येक वर्ष संग, त्यहाँ गर्छन, एक ठूलो स्थान साँच्चै छ त्यहाँ, एक चर्च पेरिस Marii Magdaliny छ यरूशलेममा मन्दिर। विशेष गरी रूस मा स्थित Magdalen चर्च को धेरै: पर्म, मास्को, साराटोभ, कजान, सेन्ट पीटर्सबर्ग।
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा मन्दिर Marii Magdaliny
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा Marii Magdaliny को चर्च कहाँ छ? यस पछिको Pavlovsk पार्क। यहाँ मुख्य तिर्थयात्रा नागरिकहरु छ।
हाम्रो देश को सांस्कृतिक राजधानी मा मरियम मग्दलिनी को चर्च नै स्थान मा धेरै पटक erected। यो भवन, शहर मा पहिलो निर्माण पत्थर बनेको छ। 1871 मा यो स्थान एक चर्च त यो यहाँ निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो, एक अस्पताल थियो। सेन्ट Peterburga पेट्रा को संस्थापक को छोरा - आर्किटेक्ट Quarenghi राजकुमार पावलले Petrovich को उपस्थिति मा निर्माण सुरु भयो। उहाँले पूरा र मन्दिर गब्रिएल consecrated - महानगरीय पत्रुस। प्रतीक रोमी चित्रकार Kadesh लेखे, र भित्ति चित्र संलग्न रूसी कलाकार Fyodor Danilov। को भित्री सादगी र शोभा लागि उल्लेखनीय छ कि महारानी मारिया Feodorovna Peklo।
चर्च बाहिर कडी र unapproachable रह्यो। जसले अस्पताल मा धेरै मन्दिर अन्तर्गत फ्रान्सेली सेना संग लडाई पछि मृत्यु गाडे सैनिकहरू नजिकै विदेशी राजदूतको र सेवक लागि Crypt छ।
क्रांति पछि, अस्पताल एक जुत्ता कारखाना भयो, र चर्च मा 1931 बन्द भएको थियो। चर्च सजावट र चोरी प्रतीक, अवशेषहरूको, विशेष गरी पवित्र, desecrated, धेरै जलाए। चर्च को आन्तरिक चित्रकला गर्न ठूलो क्षति खेलौना कारखाना, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध पछि मन्दिरको भवन मा स्थित छ जो व्यवहार गर्नुभयो। रासायनिक तरल, सिलाई उत्पादन प्रयोग मिसिन को कम्पन, लगभग दुई शताब्दीअघि अनुभव छ कि मूल सौन्दर्य एक बोसो बिन्दु राखे। त्यसपछि, कोठा एक पटक एक सुन्दर चर्च, लामो खाली भएको थियो। समुदायको मात्र उन्नाइस नब्बे-पाँचौं वर्ष यसको फिर्ती नै बनाएको छ। त्यतिबेला निर्माण बाँकी लगभग केही छ: तल्ला मा सबै हराइरहेको थियो, पर्खालहरु चर्किएको मार्फत ढाकिएको थियो। रूस मा रूपमा नब्बे को दशक मा एक भयानक वित्तीय अवस्था, पनि उल्लेख थिएन मन्दिरको पुनर्स्थापना लागि वित्त थियो। सम्म 1998 Marii Magdaliny चर्च deteriorate जारी राखे। अन्तमा सबै काठ पर्खालहरु rotted र स्थानीय चित्रहरु भित्र सुशील graffiti थिए।
मात्र दुई-हजार वर्ष निर्माण नै पूर्णतया पुनःस्थापित, सेवा फेरि सुरु गरियो। पर्खालहरु मा प्राचीन frescoes र चित्रहरु पनि फेला भागहरु, वर्तमान समय, उनि लगभग पुनःस्थापित छन्। Marii Magdaliny को चर्च फर्कन थाले र संसारका सबै देशहरूमा उठाउनेहरू र संग्रहालयहरु द्वारा पाइएका उनको अवशेषहरूको र प्रतीक स्वामित्वको। अब चर्च मुख्य belfry नयाँ सोने को पानी चढा पार र घरको छानो छ।
आध्यात्मिक जीवनमा घटना: मास्को पावर Siluana Afonskogo
भर्जिन प्रतिमा। प्रतिमा अनमोल भर्जिन को "कोमल"। चमत्कारी प्रतिमा
फरिसी - यो छ? दृष्टान्तमा को अर्थ र शब्द को अर्थ
पावलले: जन्मदिन पार्टी, जीवन कहानी
के तपाईं दे र कसरी मनाउन भनेर, पहिलो विवाह वार्षिकोत्सव कल गर्छन्
कसरी परिवार आकर्षित गर्न? आमाबाबु र छोराछोरीको लागि पुस्तिका
क्याथरीन महान् को बच्चाहरु। बोर्ड र क्याथरीन को व्यक्तिगत जीवन महान्
किन चिहान र गम्भीर को सपना? दुःखमा लागि तयार?
3 जी सीडीएमए मानक मोडेम गति कसरी वृद्धि गर्न?
समुद्र buckthorn तेल: गृह यसको तयारी र प्रयोग को नुस्खा